Maalinta Haweenka oo Garoowe lagu Qabtay
Saturday March 09, 2019 - 16:07:21 in Wararka by Super Admin
Munaasibadan oo siweyn loosoo agaasimay laguna xusayey maalinta haweenka aduunka waxaa ka qaybagalay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni, Wasiirka haweenka, wasiirka arimaha gudaha, Xildhibaano katirsan baarlamaanka, xubno ka socda bulshada
Munaasibadan oo siweyn loosoo agaasimay laguna xusayey maalinta haweenka aduunka waxaa ka qaybagalay Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Deni, Wasiirka haweenka, wasiirka arimaha gudaha, Xildhibaano katirsan baarlamaanka, xubno ka socda bulshada rayidka ah iyo waftiyo laga casumey 9 ka gobol ee Puntland oo wasaarada haweenku isugu keentay si ay uga qayb qaataan xuska munaasibada maalinta haweenka aduunka.
Hal abuuro kala duwan oo kusugnaa munaasibada ayaa halkaasi kasoo jeediyey gabayo iyo buraanbur gabdho tiriyeen. iyadoo qaybaha bulshada ee munaasibada ku suganaa hadalka isaga danbeeyeen.
Wasiirka Arimaha gudaha, horumarinta dawladaha Hoose, dimuqraadiyeynta iyo arimaha federalka Puntland Maxamed Cabdiraxmaan Dhabancad ayaa hambalyo u diray dhamaan haweenka Puntland isagoo soo hadal qaaday saamiga siyaasadeed ee Haweenka Puntland oo aad u hooseeya wuxuuna sheegay haweenku hogaanka Puntland qayb weyn kaga noqon karaan doorasho qof iyo cod ah taasna ay ku hawlan yihiin.
Wasiirka wasaarada Haweenka Puntland MArwo Aamina Cismaan Jaamac ayaa hambalyada xuska maalinta haweenka Puntland kadib sheegtay in wasaaradu laba jibaari doonto dadaalka ku aadan sidii dumarka xuquuqdooda loo sugi lahaa, cadaaladna loo horkeeni lahaa kuwa caadaystey dhibaataynta haweenka.
Ugu danbayna Madaxweyne Siciid Cabdilaahi Deni oo soo afmeeray munaasibada ayaa hambalyo u diray dhamaan haweenka Puntland munaasibada xuska maalinta haweenka ah, isagoo ugu baaqay inay midoobaan doorkii lagu aqoon jireyna soo celiyaan.